MWC 2021 ကိုကျင်းပလိမ့်မည်။ သို့သော်ဝေးလံသောနေရာတွင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြင့်ပြောင်းနိုင်သည် Androidsis
Nerea Pereira | | UHI
GSMA ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ Mobile World Congress 2020 ကိုဖျက်သိမ်းပါလူအများတို့သည်ကောင်းကင်သို့အော်ဟစ်။ ၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းပြပွဲသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများကြောင့်ပထမဆုံးပွဲစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်အခြားအဖြစ်အပျက်များအားအဘယ်ကြောင့်ဆက်လက်ကျင်းပရသည်ကိုသတင်းစာများကနားမလည်ကြပါ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်.
ယခုတွင်မူဤအတိုင်းအတာသည်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်၎င်းကိုစည်းရုံးရန်တာဝန်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်အောင်မြင်မှုထက်ပိုမိုကြောင်းရှင်းလင်းစွာသိလာရသည်။ သို့သော်အဘယ်သို့ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည် MWC 2021? ကောင်းပါပြီ၊ သတင်းဆိုးကိုကျွန်တော်တို့ယူဆောင်လာပါပြီ။
MWC 2021 ကိုကျင်းပမည်ဖြစ်သော်လည်း ၀ န်ထမ်း ဦး ရေ နည်း၍ ဖြစ်သည်
Bloomberg ကအတည်ပြုလိုက်ပြီ GSMA သည် Mobile World Congress ၏နောက်ထုတ်ဝေမှုတွင်အလုပ်လုပ်နေသည်, ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့အဆုံးမှာဒါမှမဟုတ်မတ်လရဲ့အစမှာကျင်းပလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်။ ဝေးလံသောဒေသများနှင့်ပေါင်းစပ်မည့်မျိုးစပ်စပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီ၏လုပ်သားအင်အား၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုကုမ္ပဏီမှဖယ်ထုတ်ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်း
Mobile World Congress သည် ၈၀ ရာနှုန်းကိုကိုယ်စားပြုသည် GSMA အုပ်စု၏နှစ်စဉ်ဝင်ငွေStephanie Lynch-Habib ကုမ္ပဏီ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိချုပ်သည်အလုပ်သမားအင်အား ၁၀၀၀ ခန့်ရှိသောကုမ္ပဏီ၏လုပ်သားအင်အားငါးပုံတစ်ပုံကိုအလုပ်မှထုတ်ပယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
ပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ကတော့သူတို့ဟာပြန်လည်နာလန်ထူမှုမြင်ကွင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတိုတောင်းတဲ့ကာလမှာမကြည့်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်တာဖြစ်တယ်။အနည်းဆုံးသုံးနှစ်«။ Stephanie ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းအခြေအနေသည်အလွန်ခက်ခဲပြီး GSMA ဆက်လက်လည်ပတ်ရန်အတွက်ဤအစီအမံများလိုအပ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ MWC 2021 ရှိလိမ့်မည်ဟုသူတို့အတည်ပြုပြီးပါကလာမည့်ထုတ်ဝေမှုသည်အဝေးမှတင်ဆက်မှုနှင့်ကုန်စည်ပြပွဲတွင်အသုံးပြုသူအရေအတွက်အရအကန့်အသတ်ရှိခြင်းသည်မျိုးစပ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ GSMA အမှုဆောင်အရာရှိကဖော်ပြသည်မှာ -ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သူတို့သည်အဝေးမှပါ ၀ င်လိုသည့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားမည့်အဖြစ်မှန်ကိုရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်«။ ဟုတ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းအဝေးမှဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ Androidsis အဖွဲ့သည် Mobile World Congress ၏နောက်ထုတ်ဝေမှုကိုဖော်ပြရန်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » UHI » MWC 2021 ရှိလိမ့်မည်နည်း ပုံရသည်၊ သို့သော်ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်
875nm Snapdragon5သည်လမ်းပေါ်တွင်ရှိနေသည်။ Qualcomm သည်၎င်း၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်